ESPN မော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag မော်ကွန်းတိုက်: ESPN
ဝိန်း, NJ (သြဂုတ်လ 15, 2019) - JVC Professional ကဗီဒီယို, JVCKENWOOD အမေရိကန်နိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, ယနေ့ Big တောင်ပိုင်းညီလာခံတစ်ခု NCAA ရတိုင်း 1 ကောလိပ်အားကစားကွန်ဖရ, ပေး ProHD GY-HM850 ပခုံး-mount cam-corders အပေါ်စံထားပြီးကြေငြာခဲ့သည် အဆိုပါ ESPN + streaming subscription ကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အားကစား၏ multi-ကင်မရာလွှမ်းခြုံ။ "ဒါဟာပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အပိုင်းအစရဲ့နှင့်အဘို့အညာဘက် tool ကိုဖွင့် ...
ခရစ် Ray ESPN ရဲ့ X ကိုဂိမ်းများရီးရဲလ်လမ်းလှုပ်ရှားမှုအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်ရွှေဖမ်းဆီးဖို့ Cartoni ရွေးကောက်
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာခရစ် Ray မော်ကွန်းရိုက်ချက်များဖမ်းယူထဲကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ အဆိုပါစကိတ်စီးစက်မှုလုပ်ငန်း၌သူ၏စကနေတဟီတီအတွက်ဖုန်စက်ဘီးပေါ်ရော်ဘီကထုတ်တဲ့ Maddison လှိုင်းလှိုင်းတံပိုးကိုမြင် 30 သန်းအမြင်များစပါးကိုရိတ်သောဗိုင်းရပ်စ် hit '' Pipedream '' အပေါ်သူ၏အလုပ်, Ray ရဲ့ပြေးခြင်းနှင့်ရိုက်ကူးရေး၏သေနတ်စတိုင်သူ့ကိုအောင်မြင်သောစေပြီ။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့စကိတ်စီးခြင်းနှင့်အတူစတင် ...
LiveIP စတူဒီယို Project မှဆုတစ်ဟက်ထရစ်ပြီးပါက IBC2016 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုဆွတ်ခူး
အဆိုပါချင်းရိုင်, အမ်စတာဒမ်, 12 စက်တင်ဘာလ 2016 - အ VRT-EBU LiveIP စတူဒီယိုစီမံကိန်းအမ်စတာဒမ်အတွက် IBC2016 မှာဂုဏ်သတင်း Gala ဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်းအကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းများအတွက် IBC2016 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ LiveIP စတူဒီယို, လုံးဝအိုင်ပီနှင့်အိုင်တီနည်းပညာကိုအခြေခံသည့်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝလည်ပတ် Multi-ရောင်းချသူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုစနစ်, များအတွက် BT အားကစားထည့်သွင်းတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာထိပ်တန်းဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် ...
ကို Creative စတူဒီယို Expanded အာကာသ & In-House ရဲ့မူရင်းဂီတနှင့်အတူစှမျးမရင်းနှင့်လက်မောင်းပေါင်းစည်းဖန်တီးမှုစတူဒီယို Mixtape ကလပ်သည်လည်းကျယ်ဝန်းအဆောက်အဦများနှင့်သက်တမ်းကြာအစ်မကုမ္ပဏီ Huma-Huma နှင့်အတူအသစ်အတုမိတ်ဖက်ပါဝငျသောသိမ်းကျုံးတိုးချဲ့ခံထားပြီးလိုင်စင်။ အဆိုပါကြေညာချက်ကို Google နှင့်အတူအလုပ်၏ကွပ်မျက်အဖြစ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပါအဝင်အခြေခံစံနှုန်းယခုနှစ်ဒေါက်အပေါ်ကြွလာ ...
အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများ: #NABShow မှာအလုပ်ရှာဖွေရေးတရားမျှတသောဧပြီလ9လက်လွတ်မနေပါနဲ့
အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများ: အထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတရားမျှတတဲ့လက်လွတ်မနေပါနဲ့ Pamela Kleibrink Thompson ကအားဖြင့် NAB ပြရန်မှာအလုပ်ရှာဖွေရေးတရားမျှတသောဧပြီလ9လက်လွတ်မနေပါနဲ့! အဆိုပါအသံလွှင့်ပညာရေးအသင်း (BEA) နဲ့ပူးပေါင်းအဆိုပါ NAB ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း (NABEF)9နံနက် မှစ. , ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10 အပေါ် Las Vegas မှာအဆိုပါ NAB ပြရန်စဉ်အတွင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးတရားမျှတသော hosting နေကြသည် ...
ESPN များအတွက် Accedo အင်အားကြီးနိုင်ငံများအတွက် Smart TV ကအားကစားဝန်ဆောင်မှု
Sao Paulo, ဘရာဇီး, 19th ဖေဖော်ဝါရီလ 2014- Accedo, တီဗီလျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ခေါင်းဆောင် ESPN, တစ်ဝေါ့ဒစ္စနေးကုမ္ပဏီများအတွက်အားကစားနှင့်ဘောလုံး application ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Brasil အတွက် ESPN 8.7 သန်း subscribers တွေနဲ့အဓိကအားကစား cable ကိုရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တီဗီကွန်ယက်ကိုထိုကဲ့သို့သော 2014 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲ, များအတွက်အရေးကြီးသောအသံလွှင့်အခွင့်အရေးများရှိပါတယ် ...